Kugqugquzelwa amadoda avikele abesifazane | News24
Kugqugquzelwa amadoda avikele abesifazane
ISITHOMBE: SITHUNYELWEAmalungu omphakathi wase Hambanathi ngesikhathi kunemashi yokuqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane eHambanathi.
AMALUNGU omphakathi waseHambanathi oThongathi aphume ngobuningi bawo ngesikhathi kunemashi yokuqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ngesonto eledlule.
Abantu abebeyingxenye yalemashi babuthane enkundleni yezemidlalo iHambanathi bephethe izingqwembe ezinemilayezo exwayisa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane endaweni.
Lomkhankaso bewuhambisana nesikhumbuzo sowesifazane wasendaweni uNks. Zandile Manqele owadlwengulwa waphinde wabulawa ngesihluku ngenyanga kaNcwaba (August) kulonyaka.
Amalungu omphakathi abesho ngazwi linye ethi indawo yaseHambanathi kakusiyo indawo yezinswelaboya.
Okhulumela ihhovisi lomtapowolwazi (Library) wase Hambanathi uMnu Siyabonga Mtshali uthe, “Siphinde saba nemidlalo enhlobonhlobo okuhlanganisa ibhola lezinyawo, ikhilikithi kanye neminye eminingi. Besihlose ngayo ukugqugquzela abantu ukuthi bazivocavoce ukuze baphile kahle bengahlushwa yizifo. Sisebenze kahle kakhulu namalungu omphakathi ukwenza lomcimbi ube yimpumelelo futhi sizimisele ukuwenza njalo ngonyaka ngenyanga ka-August njengoba kusuke kuyinyanga yabesifazane. Sihlose ukuqhakambisa ukulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane endaweni,” esho echaza.
Uphinde wathi bahlose ukugqugquzela abantu besilisa ukuthi balekelele emkhankasweni wokulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane.
“Sigqugquzela namadoda ukuthi abeqotho alekelele ekulwisaneni nalesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Sikwenza lokhu ukuvikela isithunzi nokubaluleka kwabantu besifazane,” kusho uMtshali ephetha. Kulomcimbi bekukhona nekhansela lendawo uNkk Zanele Chili kanye nezikhulu ebeziqhamuka kuMasipala weTheku.